Xa iintsana zikhula, zinokuhlangabezana nezifo ezithile, imbangela ebalulekileyo yokutya. Eli xesha lilona lilukhuni kunjaba kwisicwangciso sobugcisa. Oku kungenxa yokuba ngeli xesha lexesha ukubunjwa kwezicubu zenyama yezilwanyana kwenzeke kokubili ngokulinganayo nokulinganisa. Kuphuhliso olufanelekileyo, ulwazi lwezilwanyana luya kufuneka ukuba kuthathe amanyathelo afanelekileyo kwaye kusebenze unyango olufanelekileyo ngexesha. Ukusebenzisa ulwazi lwe-dietology, unokubona ukuba utshintsho ekudleni kwenja lungachaphazela njani ukukhula komzimba, ukucacisa ukuphulwa kunye nokubonakaliswa kwazo kwekliniki. Ukuphazamiseka kungavela ngenxa yokungabi nantoni okanye, ngokuchasene noko, ukugqitha kwamalungu okutya, banokuzibonakalisa ngokwabo kwinqanaba lokubunjwa kwamathambo okanye amalunga. Kule ncwadi, sinikela ukuqwalasela izifo eziqhelekileyo kunye nokunyangwa kwezifo kuma-puppies.
Ukwenziwa okungalunganga kwamathambo
Xa ithambo likhula, lihlala lihamba kwaye lihlaziywa ngenxa yomsebenzi weeseli zayo. Ukuba uyayilandela ngokuthe ngqo umlinganiselo we-hormonal, ungagcina ingqibelelo yethambo le-puppy.
Ngamanye amaxesha ukukhula kwezilwanyana kunokuphazamiseka. Oku kwenzeka ngenxa yokungondleki, izidumbu ezinokuthi zibe emathunjini, izifo ezibangelwa yi-hormonal, kunye nezinye iziphulo. Izilwanyana kufuneka zikhawuleze ziqikelele ukukhawuleza kokukhula kwidlwane, zichonge isizathu kunye nokuzinqumla, ukuba kunokwenzeka.
Esi sifo sifanayo kubantu nasezinja. Ngexesha elide, njengolwazi olwenziwe kunyango lwezifo zethambo, ezidibeneyo neengxaki zokutya, iziqu ziphela zaphela. Iirkethi zivela ngenxa yokungabi nantlungu ye-vitamin D emzimbeni, ibonakaliswe ngokungasebenzi ngokwaneleyo kwamathambo. Kwiminyaka yakutshanje, kubekho iimeko ezimbalwa zezi zifo kumagqirha, ayenxulumene neziphoso zokutya.
Ukulahleka kwe-calcium kuma-puppies kubangela isifo se-bone, esabizwa ngokuba ngumntwana osteofibrosis. Esi sifo senziwa rhoqo, ngenxa yokungondleki. Esi sifo sihlala sisenza xa intsana idla ukutya kwekhaya, okungeyona into enhle kuyo, njengoko kuninzi inyama kuyo kwaye akukho mfuneko yamaminerali ayimfuneko (asimele sikhohlwe ukuba umxholo we-calcium ekudleni kufuneka udlule kabini umxholo we-phosphorus). Inani elincinane le-calcium yimbangela ye "syndrome yenyama enye", ngokutsho kwezilwanyana zezilwanyana, ngenxa yoko, umxholo we-calcium egazini uyancipha, ngoko umzimba uphoqelelwa ukuzalisa ukungabikho kwe-calcium ngenxa yamathambo esithambo. Esi sifo siphula amathambo kunye nezigulane. Kukho ukutshintsha kwesikhumba se-puppy, kukho impendulo ebuhlungu ekunyanzelekeni kweminwe, ukuhlanjululwa kuvela emadolweni nakwi-hocks, i-platigradia (ukuyeka) ibonakala. Ithambo libuthathaka, liyakwazi ukuphula ngenxa yezizathu ezicacileyo. Ezi zizahlulo zinzima kakhulu ukunyanga, zinehlobo "lomthi oluhlaza".
Ukunyanga ngempumelelo i-osteofibrosis kumagqirha, kuyimfuneko ukuyijonga isifo ngexesha kwaye umane ubuyisele ukulinganisela kokutya kwe-phosphorus-calcium. Kubalulekile ukudlulisela intshontsho kwi-forage ekulungeleyo, eya kulungelelaniswa nobukhulu bayo, eya kuba yanele kwintuthuko eqhelekileyo. Ubungakanani bezilwanyana akufanele kube ngaphezu kweenyanga ezi-6-7 ukuba inkukhu iyinzala enkulu.
Ukusilela kwezinye izondlo
Ukuntuleka kwezondlo kungakhokelela kwisifo esiyingozi seethambo zamathambo. I-Vitamin A ibalulekile ngexesha lokukhula kwamathambo ukuze kusekwe isifuba se-puppy. Ukuba akwanele, mhlawumbi ukunciphisa okanye ukuguqulwa kweethambo zesithambo kunokwenzeka. I-Vitamin C ayinayo indima ekwakheni amathambo kwi-puppy ngexesha lokukhula.
I-Vitamin D engaphezulu
I-vitamin D eyongezelelekileyo ibangela isifo esifana ne-hypertrophic osteopathy syndrome. Esi sifo siqhelekile kwiintsana. Izicubu zeThambo kunye nesi sifo zikhula ngokungazi: "ukuvuvukala", isilwanyana siqala ukuhlambalaza. Ukugqitha emzimbeni we-calcium kunye ne-vithamini D - into edla ukuhlangana nayo, ingakumbi ibonakaliswe kwiintsana zeentlobo ezinkulu. Isifo esinjalo asiphilwanga.
Ukugqitha kwamavithamini A
Ukugula okunjalo kumantombazana kwenzeka ngokuthe gqolo kunama-kittens. Oku kubangelwa ukuba iikati zidla ezininzi zesibindi. Kwii-puppies, i-vitamin A ibininzi ibonakala ngenxa yokutyiwa kweoli yeentlanzi imihla ngemihla. Ngenxa yobuninzi beli vithamini, ukukhawuleza kokukhula kwenzeka, amathambo amathuba aphelile. Le ntsholongwane ayinakuphelelwa.
I-Osteochondrosis yenzeka ngexesha lokukhula kwesilwanyana, esi sifo sichaphazela izicubu zamathambo kunye namajoyina, ngokuqhelekileyo kwiintombi zeentlobo ezinkulu kwaye zibonakalisa ngendlela yoxinzelelo lwe-articular cartilage, obangela ubuhlungu, ukudibanisa kunye nokuguqa kwethambo. Ngamanye amaxesha ukukhwabanisa kunokukhokelela ekuchithweni kwe-cartilage ye-articular.
Iingxaki ezihlukahlukeneyo zenza ukwanda kwenani lokutya okudliwayo, okukhokelela ekunyameni okugqithiseleyo, kwaye oku kwandisa umbane osebenzayo kumalungu kunye neengqungquthela ezenziwe kuphela. Ukunyanga kwezi zifo kumagqirha kubalulekile ukutshintsha ukutya kwazo. Ukuvavanya ngokunyanisekileyo umgangatho kunye nokuchaneka kokutya. Uvavanyo olunjalo luya kusebenza kakhulu.
Ipilisi engaphezu komzimba
Iintsana zeentlobo ezinkulu zikhokelela kwizifo zamathambo kunye namalungu, kunye neentsana zeentlobo ezincinci zithatha uthabatha ukuya ekutyebeni kokuqala, okubizwa ngokuba yi-adulocytic hyperplasia yokuqala. Ukuba i-puppy flooding, ke iyakwandisa inani lamatye e-mafutha ngendlela yamacango, kwaye ekugqibeleni igcwalise ngamanqatha.
I-tortoise yase-Central Asia: imithetho yokunyamekela nokugcinwa
Indlela yokunika unyango lwekati
Indlela yokuphakamisa inkunzi yaseBassenji
Indlela yokunyamekela ikati yasePersian
Indlela yokupheka i-shrimps efriziwe
Iipatato zihamba ngeklabishi
I-Recipe ye-dessert ehlobo elula: i-apula iyanyuka
Kutheni abantwana bebathanda amnandi
Ukusetyenziswa kwesinamoni ioli efunekayo
Ukuzivocavoca umzimba kunye nokuphila ngendlela yokuhlala
UCarp kwisitayela esidala saseRashiya
Ngaba kunokwenzeka njani ukudala ukungcola kwigumbi?
Ukuphululwa koxinzelelo kwizingane zasesikolweni
Iikona ze-Cheesy (ukusuka kwincwadi yokupheka uDkt Oetker)
Iindlela zokusebenzisa ii-oyile ezibalulekileyo
Izilwanyana zamanqanaba ekunakekelwa kwesikhumba esikhulileyo
Iingoma ezingama-25 malunga nomhlaza webele
Ioli yepilisi ekudleni kwabantwana
Izinto ezilishumi ezenza ibhinqa elitshatileyo